Resadresaka eo amin'i Etazonia sy Iran? Mpanorina IIPT manandrana manokatra varavarankely
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Resadresaka eo amin'i Etazonia sy Iran? Mpanorina IIPT manandrana manokatra varavarankely
Ny mpanorina sy filohan'ny New York-monina Ivotoerana iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany (IIPT), Louis D'Amore dia miangavy an'i Etazonia sy Iran mba hanararaotra ary hanokatra ity varavarankely tery ity. Mety hanampy amin'ny fisorohana ny fiakaran'ny vidim-piainana any Etazonia - Niady tamim-pilaminana i Iran.
Izany dia tonga tamin'ny fotoana nitondran'ny mpitondra eran'izao tontolo izao an'izany ny Chancellor alemana Angela Merkel, ny filoha frantsay Emmanuel Macron ary ny praiminisitra anglisy Boris Johnson, ny alatsinainy maraina teo. Niantso ny alahady ny Papa Francis mba hanao fifampidinihana: “Miantso ny lafiny rehetra aho mba hitazona ny lelafo hifanakalozan-kevitra sy ny fifehezan-tena ary hialana amin'ny aloky ny fankahalana. Fahafatesana sy fandringanana ihany no entin'ny ady. ”
Ny zava-misy fa ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ireo sivilizasiôna dia mijoro amin'ny fanoherana ny fifandonan'ireo sivilizasiôna dia lohahevitra niadian-kevitra. Ilay hevitra hoe ny fifandonana eo amin'ny samy kolontsaina sy ny sivilizasiona dia hisolo ny fifandonana ara-politika sy ara-tafika, ho anisan'ny anjaran'ny olombelona, ​​ary dia nofenoin'ilay teôria “Faran'ny tantara”. Afaka milaza fa ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ireo sivilizasiôna dia iray amin'ireo fandraisana andraikitra vitsivitsy afaka namorona onja lehibe, na dia tsy lehibe indrindra aza, tao anatin'ny folo taona lasa.
Ny masoivoho rehetra dia mety ho Ambasadaoron'ny fandriampahalemana.
Ny filohan'ny IIPT dia namporisika ny mpitondra any Iran sy Etazonia hitsidika ny taona 2001 indray Taona iraisam-pirenena ho an'ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ireo sivilizasiôna araka ny naroson'ny filoha teo aloha Iran Khatami.
Roa ambin'ny folo taona lasa izay, ny mpanorina sy ny filoha IIPT, Louis D'Amore dia nanararaotra - miaraka amin'i Juergen Steinmetz, mpanonta ny eTurbo News - hanome lahateny ho an'ireo mpitarika Iraniana ao amin'ny Hall of the People of Islam any Tehran. Ny lohahevitry ny lahatenin'i D'Amore dia Fandriampahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany.
Nanomboka ny lahateniny i D'Amore tamin'ny fanamarihana fa i Iran dia tranon'ny iray amin'ireo sivilizasiona mitohy tranainy indrindra, miaraka amin'ireo fananganana tantara sy tanàn-dehibe nanomboka tamin'ny 4000 talohan'i JK. Tany manan-karena amin'ny tantara izy - manan-karena amin'ny siansa sy ny haitao - ny kanto, literatiora ary kolontsaina - ary tany izay latsaky ny 25 ampahatelon'ny mponina dia latsaky ny XNUMX taona - ary noho izany dia tany misy ho avy lehibe.
Nanamarika ihany koa izy fa tamin'ny 1998, nandritra ny volana Ramadany, ny filoham-pirenena Iraniana Mohammad Khatami dia nanolotra ny fivorian'ny UN UN mba hanambarana ny taona 2001 ho taom-pifanakalozan-kevitra iraisampirenena eo amin'ny sivilizasiôna - izay noraisina ihany.
Filohan'i Iran teo aloha
Ny tolo-kevitry ny filoha teo aloha Khatami dia nifototra tamin'ny fahitany marina ny fomba fananganana filaminana milamina sy ara-drariny kokoa amin'ny fomba fijery etika - paradigma vaovao mifototra amin'ny fiaraha-miory sy fangorahana. Adidin'ny rehetra ny miantso ny governemanta sy ny olona manerantany hanaraka paradigma vaovao ary hianatra avy amin'ny zavatra niainana taloha. Niantso manokana izy ny hanaovana dinika niniana natao teo amin'ireo manam-pahaizana, mpanakanto ary filozofa. Ny filoha Khatami mihitsy no niasa tamin'ny fananganana fifanakalozan-kevitra sy fifandraisan'ny samy mpino nandritra ny taona.
Seyyed Mohammad Khatami dia filoham-pirenena fahadimin'i Iran nanomboka ny 3 Aogositra 1997 ka hatramin'ny 3 Aogositra 2005. Izy koa dia minisitry ny kolontsaina tao Iran tamin'ny 1982 ka hatramin'ny 1992. nitsikera ny governemanta teo aloha Mahmoud Ahmadinejad izy.
Natolotra tamin'ny faran'ny taonjato faha-20 io tanjona io hamela taonjato iray feno tsy fitoviana, herisetra ary fifanoherana - natolotra tamin'ny fikasana handray soa avy amin'ny zava-bita sy traikefa ananan'ny sivilizasiona rehetra - miaraka amin'ny vavaka izay manomboka taonjato vaovao an'ny zanak'olombelona, ​​ny fahatakarana ary ny fandriam-pahalemana maharitra mba hankafizan'ny olombelona rehetra ny fitahian'ny fiainana.
Nandritra ny 34 taona niainany, ny Ivotoerana Iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany (IIPT) dia namporisika ny fifanakalozan-kevitra teo amin'ireo kolontsaina sy sivilizasiôna hatrany ifotony miaraka amin'ny finoana fa “Ny masoivoho rehetra dia mety ho ambasadaoro ho an'ny fandriam-pahalemana”Ary koa amin'ireo mpitondra indostrialy sy governemanta.
Ny Taom-pizahan-tany iraisam-pirenena 2017 ho an'ny fampandrosoana maharitra sy ny fandriam-pahalemana dia niorina tamin'ny asan'ny IIPT hatramin'ny niorenany tamin'ny taona 1986 - ny Taom-piomanana Iraisam-pirenena misahana ny fandriam-pahalemana.
Ny Fihaonambe Iraisam-pirenena voalohany an'ny IIPT, Vancouver 1988, dia nampiditra voalohany ny foto-kevitra momba ny fizahan-tany maharitra - ary vaovao Paradigma ho an'ny tanjon'ny fizahantany avo kokoa izay manome lanja ny anjara toerana lehibe amin'ny fizahan-tany amin'ny:
Mampiroborobo ny fahatakarana iraisam-pirenena
Fiaraha-miasa eo amin'ny firenena
Fiarovana ny tontolo iainana sy ny fitehirizana ny harena voajanahary
Fanatsarana ny kolontsaina sy fanomezana lanja ny vakoka
Fampihenana ny fahantrana ary
Manasitrana ratra amin'ny fifandonana
Araka ny tatitra Trave Wire News tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia nilaza ny tompon'andraikitra fizahan-tany any Iran fa hisolo ny vola miditra amin'ny solika ny fizahan-tany. Izany dia niresaka araka ny filazan'ny filoha lefitra Iraniana Ali Asghar Mounesan, izay Lehiben'ny lova ara-kolontsaina, asa tanana ary orinasam-pizahan-tany, "Tongasoa eto Iran ny Amerikanina. "
Izany dia niako tao amin'ny hafatra Facebook maro, famoahana gazety ary fanentanana mailaka nataon'ny mpandraharaha mpizahatany Iraniana. mitady orinasa amerikana sy eropeana.
Nanolo-kevitra i D'Amore tamin'ny lahateniny tamin'ny 2008 fa manana fotoana isika amin'ity fihaonambe ITOA voalohany ity - hanombohana indray ny fifanakalozan-kevitra amin'ireo sivilizasiona - miaraka amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany izay mitana andraikitra lehibe amin'ny fanatanterahana azy.
Fabio Carbone, masoivoho IIob GLobal
Vao tsy ela akory izay, tamin'ny alàlan'ny ezaky ny Dr. Fabio Carbone, mpikaroka mpiara-miasa amin'ny Ivon-toerana ho an'ny fitokisana, ny fandriampahalemana ary ny fifandraisana ara-tsosialy, ny oniversiten'i Cambridge, ary ny masoivoho eran-tany IIPT, IIPT Iran Toko dia natsangana tao Iran.
Ny teratany italianina Dr. Carbone dia nanao seminera sy atrikasa marobe tamin'ny fanasan'ny oniversite, masoivohon'ny governemanta ary ireo fikambanana fizahan-tany misarika olona mazoto maherin'ny 200 amin'ny sasany amin'ireo hetsika ireo.
Louis D'Amore namarana: "Araka ny zavatra niainako manokana tamin'ny taona 2008, Iraniana dia anisan'ny olona mandray olona, ​​tia mandray olona ary tia fihavanana eto amin'izao tontolo izao."
IIPT dia mazoto hatrany hamangy ny vinan'ny Filoha Khatami momba filaminana milamina sy ara-drariny kokoa mifototra amin'ny fiaraha-miory sy ny fangorahana ary ny anjara asan'ny "Fandriampahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany" manatanteraka an'io tanjona io.
IIPT Credo an'ny mpandeha milamina
Ankasitraho ny fahafaha-mandeha sy miaina an'izao tontolo izao ary satria ny fiandohana dia miantomboka amin'ny tsirairay, Manamafy ny andraikitro manokana sy ny fanolorantenako ho:
Fitsangatsanganana amin'ny saina malalaka sy malefaka
Ekeo am-pahasoavana sy fankasitrahana ny fahasamihafana hitako
Manomeza voninahitra sy miaro ny tontolo voajanahary izay mamelona ny fiainana rehetra
Ankasitraho ireo kolontsaina rehetra hitako
Manaja sy misaotra ireo nampiantrano ahy tamin'ny fandraisana azy ireo
Atolory ny tanako ho sakaiza amin'ny olona rehetra sendra ahy
Tohano ny serivisy fitsangatsanganana izay mizara ireo fomba fijery ireo ary mandray andraikitra amin'izy ireo ary,
Teknolojia hanoritana fitomboana vaovao ho an'ny indostrian'ny motera manerantany
Toerana fitetezam-paritany amerikana mitombo tsy dia fantatra loatra: Montgomery, Alabama